hataru/हटारु: December 2009
एकटक हेरिरहेकी थिइन्। उनका आँखा ठीक दक्षिण-पूर्वमा उभिएको हिमालमाथि अडिएका थिए। जो सेतै फुलेको एउटा बूढो मान्छे िठंग उभिएजस्तो देखिन्थ्यो।
Posted by Nabin Bibhas at 7:03 AM3comments:
सात बजेतिर पुलिस अन्तराष्टिय सम्मेलन केन्द्रतिर एक लाइन बसेका थिए भने पूर्वमन्त्री हिसीला यमीको नेतृत्वमा नाराबाजी गर्दै आन्दोलनकारी बानेश्वर पुलतिर जाँदैथियो । आन्दोलनकारीले त्यसबेलासम्म सडकमा रहेका डिभाइडर लगभग ढालिसकेका थिए ।
Posted by Nabin Bibhas at 7:54 AM 8 comments:
फोटो खिचेर दिन धकेल्दै प्रचण्डपुत्र प्रकाश
आजदेखि तीन प्रमुख दलले फेरि वीरबलको खिचडी पकाउन सुरु गरे। माओवादीले एक महिने तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुअघिल्लो दिनसम्म खिचडी पकाउने काम जारी थियो। माओवादी पुस ७ सम्मका लागि एक महिने तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छ।
Posted by Nabin Bibhas at 8:48 AM2comments:
११ नम्बर गाडी
जापानी हुन् या कोरियाली महिला पर्यटक सर्वोच्च अदालतअगाडिको बाटोमा मस्तराम िहंड्दै
अव्यवस्थित सडक। सडकको क्षमताभन्दा बढी गाडी। प्रदुषण। यी सब देख्दा हप्तामा एकपालि 'बन्द' भए हुँदो होजस्तो लाग्थ्यो। बन्दमा कमसेकम सडकमा आफूखुसी िहंड्न त सकिन्छ।
नेपाल बन्द, आज। कैलाली, डुडेझारीमा प्रहरीले सुकुम्बासी मारेको विरोधमा माओवादीद्वारा बन्द।
एघार नम्बर गाडीमा नयाँ बानेश्वरबाट कारखाना(अफिस) आउँदा मज्जा लाग्यो। आज खोला तर्न बाह्र बजेको छैन। नत्र त खोला तर्न यति गाह्रो कि! न ट्राफिक न बटुवाले जेब्रा क्रसिङबाट नै तर्छन्। तीनपानेको तालमा चलाउने डाइभरको के भर?
Posted by Nabin Bibhas at 2:44 AM5comments:
हरियो डाँडामाथि …
भन्छन् -चट्कनको तालमा बच्चालाई पढाउन हुन्न । सधैं 'पढ्' भनेर कर गर्न हुन्न। यसले उनीहरुको बालमनोविज्ञानमा असर पर्छ। पढाइप्रति मोहभंग हुन्छ।
के यो आदर्श सबैले पालना गरेका छन्? रामजाने।
'अर्काका उदाहरण दिएर उनीहरुलाई किन दुखी बनाउने? आफ्नै उदाहरणबाट दिन्छु.' घोराही क्याम्पसका अंग्रेजी सर नारायणिसंह गुरुङ आफ्नै उदाहरणबाट पढाउन मेसो थाल्थे। कसोकसो उनको सिको गर्न मन लाग्यो।
Posted by Nabin Bibhas at 6:47 AM2comments: